Abavelisi beLactose kunye nabanikezeli - China iLactose Factory
I-Lactose i-Monohydrate imhlophe, ayinambitheki, i-crystalline powder.Ikunyanzeliswa okuhle kunye nokungaziphathi kakuhle ngenxa yenxalenye yayo entle kunye nomgangatho othile ophakamileyo.Le mveliso ithobela izicelo ze-USP / EP / BP / JP kunye ne-CP esemgangathweni, esetyenziswa ngokubanzi i-granulation emanzi, inokuhlangabezana neemfuno ezahlukileyo ngenxa yokuhanjiswa kobungakanani bamasuntswana (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh, 200Mesh, 300Mesh).
Umhlophe, awunambitheki, ngumgubo wecrystalline onefluidity elungileyo.I-Lactose yamasuntswana eveliswe ngenkqubo ye-crystallization inokuhanjiswa kwiinkcukacha ezininzi ezinobungakanani obuncinci bokusasazwa emva kokucoca (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh). I-Sieved Lactose inekristale enye kunye nokubamba okuncinci kweemakristal. Iimveliso ezichaziweyo ezinokusetyenziselwa ii-ocassions ezahlukeneyo. I-granulation emanzi ayisiyonkqubo yenkqubo yokugcwaliswa kwecapsule ngenxa yokungalunganga, umkhuhlane ...
I-Lactose ye-Spray-Drying imhlophe, i-powder engenakunambitha kunye ne-fluidity.Ine-fluidity egqwesileyo, ukuxuba ukufana kunye nokunyanzeliswa okuhle ngenxa ye-particle ye-spherical kunye nokuhanjiswa kobukhulu obuncinci, kulungele ukunyanzeliswa ngokuthe ngqo, ukhetho olufanelekileyo lokuzaliswa kwe-capsule kunye nokuzaliswa kwe-granule. Izinto eziluncedo zesicelo: Ukomiswa ngokukhawuleza ngenxa yokunyibilika kwamanzi; Ukuqina kwethebhulethi elungileyo ngenxa yokumisa isitshizi; Ingahanjiswa ngokufanayo kwifomula ephantsi yesithako seziyobisi;
I-Lactose-Starch Compound Spray-drying compound equka i-85% ye-Lactose Monohydrate kunye ne-15% yesitashi sombona. Iphuhliswa ngokucinezelwa ngokuthe ngqo, kwaye idibanisa ubumanzi obugqwesileyo, ukuxinana kunye nokwahlulwa. I-Lactose-Cellulose Compound Luhlobo lwento eyomileyo yokutshiza ene-75% ye-Alpha Lactose Monohydrate kunye ne-25% yeselulose powder.Umvelisi une-fluidity egqwesileyo, kwaye yenzelwe ngokukodwa ukucinezelwa ngokuthe ngqo.Ithekhnoloji yetafile iba lula kwaye i-economica ngenxa ye .. .